चौकी भित्र प्रहरीले बृद्ध आमामाथि यतिसम्म गरेको:: Naya Nepal
चौकी भित्र प्रहरीले बृद्ध आमामाथि यतिसम्म गरेको
काठमाडौं । हरेक देशको प्रहरी त्यस देशका जनताको रक्षाका लागि काम गर्छ । तर भारत, उत्तर प्रदेशको हमीरपुर जिल्लाको सदर कोतवालीको एक भिडियो भाइरल भइरहेको छ, जसमा प्रहरीको असली रुप देखाएको छ । पुलिस दमनको यस भिडियोले प्रहरीको पोशाकको बेइज्जत गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
ति प्रहरी अधिकारीले पहिले वृद्धा महिलामाथि हा–तपा–त गर्छन, जो रोइरहेकी छिन् । घटनाको भिडियो भाइरल भएपछि एसपीले घटनाको अनुसन्धान सीओ सदरलाई निर्देशन दिएका छन् । एसपीले भनेका छन् भिडियो केहि महिना पहिलेको हो र अहिले भाइरल भएको छ ।
जहाँ महिला प्रशासन विरुद्ध हिं–साको बारेमा प्रहरी प्रशासनमा नयाँ आदेश जारी गरिएको छ, तर यो आदेश प्रहरी चौकीहरुका लागि हास्यास्पद छ, महिलाको सुरक्षा र सम्मानलाई मात्र छोड्नुहोस्, ती महिलाहरुलाई अपमान गरिरहेका छन् ।
हमीरपुरको सदर कोतवालीमा तैनात निरीक्षक श्याम प्रताप पटेलको भिडियोले प्रहरीको यस दोस्रो अनुहारलाई उजागर गरेको छ । यस भिडियोमा कोतवालीको लकअप नजिक एक महिलालाई खुट्टामा हा–नेको देखिन्छ । ती आमा चि–च्याइरहेकी छिन् तर ति प्रहरी अधिकारीलाई कुनै असर परेकोजस्तो देखिएको छैन ।
जब यो प्रहरीको भिडियो सोशल मीडियामा भाइरल भयो, खैलाबैला मच्चियो । यस सम्पूर्ण घटनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै एसपी नरेन्द्र कुमार सिंहले घटनाको अनुसन्धान गर्न सीओ सदर अनुराग सिंहलाई निर्देश गरेर चाँडै रिपोर्ट दिन भनेका छन् । एसपीकानुसार अनुसन्धान रिपोर्ट आए पछि यस विषयमा कारबाही गरिनेछ ।
चिडियाघरमा बन्द वनको राजाको यो हालत देखेर कस्को मन रुदैन होला ? [तस्विरसहित]
काठमाडौं । कोरोना महामारीले मानिसहरु मात्रै होईन जनवार पनि प्रभावित भइरहेका छन् । सुडानको राजधानी खार्तोमको अल कुरेशी परिवार पार्क चिडियाघरको हालसालै एक तस्विर खुब भाइरल भयो । त्यहाँबाट त्यस्ता फोटोहरू बाहिर आए जसमा जनावरहरू अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा देखिएका छन् ।
फोटोहरू खिचे पछि चिडियाघर व्यवस्थापनले जनवारमाथि राम्रो गरिरहेको छैन भनेर स्पष्ट भएको छ । जनावरहरू, विशेष गरी सिंहहरू, जो खास कमजोर अवस्थामा देखिएको छ ।
यी तस्विर अलिक पुराना भए पनि जंगलमा हुनुपर्ने जनवारलाई चिडियाघरमा थुनेर गरिएको यस व्यवहारले सबैलाई सोच्न वाध्य बनाएको छ । वन्यजीव प्रहरीका गार्डहरूले नियमित आहार नदिएको आरोप लगाइएको छ । उनले भने कि यी सबै देशको आर्थिक संकटको परिणाम हो । जे भए पनि, यी जनावरहरूलाई मद्दत चाहिन्छ । भाग्यवस, एक जनवार सम्बन्धि काम गर्ने संस्थाले अहिले हेरचाह गर्न थालेको छ ।
चार पञ्जे संस्थाले जनावरहरु को लागी सकेसम्म गर्न को लागी कदम चालेको छ । अनुदान दिनेलाई धन्यवाद भनिएको छ । तिनीहरू जनवारलाई चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न पनि सक्षम छन् ।
चार पञ्जा समुह अद्भुत कार्य गर्दैछ, तर पशुहरू यो हालमा बाँच्नु हुँदैन । यस निवेदनमा भनिएझैं, ‘चिडियाखाना किन हो ? जसले आफैं खाना खुवाउन र यसको हेरचाह गर्न सक्षम हन सक्दैन ? जनावरहरूलाई समेत अनुमति छ ।
पशुप्रेमीका रूपमा हामी जान्दछौं । कुनै जंगली जनावरलाई बन्दी बनाइनु हुँदैन, तर जब तपाईं ती जनवारलाई विषम परिस्थितिमा बाच्न बाध्य पार्नुहुन्छ, तब बन्धक जनावरको दुर्दशा अझ झन हृदयविदारक हुन्छ ।’ हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौं कि जनावरहरुलाई बन्दी बनाइनु हुँदैन । त्यस्ता परिस्थितिहरू जंगली जनावरहरूलाई जंगलीमा एक्लै छोड्नु पर्ने सही प्रमाण हो ।
शसस्त्र प्रहरीले १५ वर्षिया किशोरीलाई यसरी बचायो
रौतहट । रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका ५ बडहवा पुल नजिकैको पोखरीबाट असोज १४ गते एपीएफ टोलीले एक बालिकालाई पोखरीबाट उद्वार गरेको छ । सोही ठाउँ बस्ने १५ वर्षिया मुस्कार कुमारी गुप्ता उक्त पोखरीमा पौडी खेल्ले क्रममा डुवेकी थिईन् ।
सो बारे जानकारी पाउनासाथै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर ११ गण रौतहटबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुर्यबहादुर सेन वलीको कमाण्डमा खटिएको एपीएफ टोलीले सो पोखरीबाट उनलाई अचेत अवस्थामा उद्वार गरेको हो । एपीएफ टोलीले उनलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल गौरतर्फ पठाएको छ ।